Waxaa xaqiiqo ah si fiican u yaqaan in iPad waa mid ka mid ah kuwa darbi in lagu isticmaalo dunida oo dhan ay malaayiin users oo sidaas daraaddeed sidoo kale waa xaqiiqda dhalashada in tirtirka oo ka mid ah files iyo dukumentiyada kale ee muhiimka ah waa shakhsi caadi ah marka la ay timaado in qalab iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in dadka mar walba doonaysa codsiga wanaagsan oo aan lahaa kaliya hubiyo in xogta laga badiyay waxaa baxey laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in xogta ay sidoo kale ilaaliyey oo ammaan iyo waxaa soo baxey in saacadda ay baahan yihiin. Waxaa sidoo kale in la xuso in tutorial tan loo qoray si ay u sameeyaan user ka war xaqiiqda ka mid ah marka ay timaado tirtirka xogta. Xaqiiqooyinka Kuwani waa mid aad caan ah ee dabiiciga ah iyo toortaha dambe ee tutorial ka dhigi doonaa in la hubiyo in aqoonta arrintan ku saabsan oo ka soo muuqanayaan in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Dadka isticmaala qaar ka mid ah xaqiiqooyinka ay noqon doonaan layaab iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale lagu talinayaa si loo hubiyo in wax soo saarka iyo barnaamijyada lagu talinayaa in marnaba in ay isticmaalaan dadka isticmaala laylis aan caawimo khabiir.
Ma jirtaa qashinka wax app kartaa iPad?
Si aad dhihi hubaal waxaa muhiim ah in iPad lahaa codsiga dib u soo celinta xogta ama ugu yaraan hal codsi oo kale waa in halkaas si loo hubiyo in ugu fiican iyo gobolka functionalities tahay waxaa laga codsadaa marka ay timaado khasaaro xogta iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in nasiib daro codsiga ninna weligii la horumariyo, si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka. IDevice No abid la soo bandhigay codsiga noocaas ah si dhisay qaababka loo hubiyo in ka dhigi doonaa in xogta marna baxey iyo sidoo kale waa ay sabab u tahay xaqiiqada ah in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in la sameeyo ceshano xogta ee sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ah waa in sidoo kale la hubiyo in codsiga ah ee barnaamijka waa in siman oo waafaqsan shuruudaha isticmaala. Kuwaasu waa arrimo kaliya in la hubiyo in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada tahay kaaftoomi badan oo aan ka dhigi lahaa.
Waxa la sameeyo haddii wax muhiim ah ayaa la tirtiray?
Waxaa jira siyaabo badan si loo xaqiijiyo in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah farsamooyinka tahay waxaa codsatay in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in Dr. Wondershare ka Fone waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in xogta ka iPad la baxey haddii wax laga qabtay kac ahayn. Wondershare Dr. Fone ayaa dhisay state of muuqaalada tahay taas oo qalab soo kabsashada sameeyo iyo user waa in sidoo kale la hubiyo in sifooyinka wanaagsan ee loo isticmaalo habka ugu wanaagsan ee. Waa in la ogaadaa in ay ku dhiirigelinayaan in barnaamijka la hubiyo in ay updates of this piece casriga ah cabsi badan yihiin bilaabay dib u dhac kasta oo aan iyo user waa la hayaa ogyahay xaqiiqooyinka iyo tirooyinka isticmaalka barnaamijka sidoo kale sameeyaan. Website-ka rasmiga Wondershare sidoo kale wax soo saarka taas oo ay la socdaan dad kale oo sabab la mid ah waxaa lagula talinayaa in ay user kasta si aad u hesho dib u dhac kasta oo aan si qaababka lagu riyaaqay laga yaabaa in sifooyinka wanaagsan.
Kabsado faylasha tirtiray on iPad iyadoo la kaashanayo Wondershare Dr. Phone
Isticmaalka Wondershare Dr. Phone waa mid fudud xasilloon iyo geeddi-socodka in lagu halkan ku xusan doonaan ayaa sidoo kale la socoto Screenshot si loo hubiyo in user marnaba helo galay nooc kasta oo ka mid ah arrimaha marka ay timaado barnaamaj iyo muuqaalada ku daray isticmaalaan. Waxaa sidoo kale in la xusay in user waa in la hubiyo in halkan tallaabooyinka lagu dabaqo ka hor codsiga kasta oo cusub ayaa lagu rakibay on iPad ah oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in ay dhacdo in wax kasta oo loo xirxiro codsiga cusub ee xogta hore ah oo farsamo ahaan overwritten sameeyo waa iyo sabab la mid ma aha recoverable. Si looga fogaado nooc kasta oo kale ee khasaare ama si looga fogaado shilka kasta waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay barnaamijka ee waxaa loo isticmaalaa sida hage ah oo uu soo sharaxay sida under:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/drfone-iphone-data-recovery.html waa in la adeegsadaa iyada oo furay si ay u hubiyaan in codsiga la soo bixi, rakiban oo ay maamulaan marka uu furan yahay:
2. Scan Start ayaa markaa waa in la adeegsadaa iyada o loo hubiyo in barnaamijkan caqli baaritaanku qalabka sida oo dhan ah oo la keeno natiijada ugu wanaagsan ee la xidhiidha soo kabashada xogta:
3. Macluumaadka ku saabsan farsamo faylasha markaas waa in loo arko haddii user doonayo:
4. goobta bartilmaameedka waxay tahay markaas in la cayimay si loo hubiyo in xogta la soo kabsaday ayaa la badbaadiyey sida ku baahida loo qabo iyo baahida user iyo meesha la doonayo iyo sidoo:
Sida loo baaqsado xog ku saabsan iPad in kiiska file muhiim ah ayaa la tirtiray?
Hoos ku xusan yihiin qaar ka mid ah talooyin ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in ay dhacdo tirtirka xogta:
1. No codsi cusub waa in lagu dhejiyaa sida ay overwrite doonaa xogta ku keeni karo dib u soo kabashada xogta jir hawsha u xun oo ka buuxa ka kaaftoomi.
2. user waa in uu isticmaalo barnaamijka ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada in laga heli karo suuqa si loo hubiyo in xogta la baxey oo aan wax khasaare ah oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka loo isticmaalo oo waafaqsan tilmaamaha buugaga ka mid ah in la qoray oo la sheegay in.
> Resource > iPad qashinka> iPad karo - Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray on iPad